कोरियाको दुई रात, राष्ट्रियताको दह्रो पाठ | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार कोरियाको दुई रात, राष्ट्रियताको दह्रो पाठ
हाम्रो मुलुकमा केही वर्षयता जातीयता, धर्म, झण्डा र राष्ट्रिय पोशाकको विषयमा चर्चा भइरहेको छ । यी कुरा विद्वता, राष्ट्रियता, राजनीतिका नाममा यसरी बारम्बार छोइरहने र कोटयाइरहने विषय होइनन् । यो त पातलो छालाभित्रको कमलो घाउ हो । यसो गरियो भने जुनसुकै बेला पनि सङ्क्रमण भई खतरा हुन सक्छ ।
आफ्नो मुलुकको यस्तो विद्यमान परिस्थितिले मलाई विगतमा कोरियामा अध्ययन गर्दाका क्षणहरूले बारम्बार झस्काउँछन् । सन् १९९२ को मे महीनाको कुरा हो । म क्वाङउन विश्वविद्यालयमा बीई दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिएँ । कक्षाका साथीहरूसँग मेरो घुलमिल, उठबस राम्रै थियो । कोरियाका विश्वविद्यालयमा मे महीनामा फुड फेष्टिभल हुने गर्दछ । त्यहाँ सबै डिपार्टमेण्टका विद्यार्थीहरूले आ-आफ्नो स्टल राख्ने गर्दछन् । ३ दिनसम्म बिहानदेखि बेलुकी अबेरसम्म विश्वविद्यालयमा चहलपहल हुने गर्दछ । विभिन्न मनोरञ्जन कार्यक्रम पनि आयोजना हुन्छन् । मैले पनि एउटा नेपाली गीत कोरियाली भाषामा उल्था गरेर गाएको थिएँ ।
साँझ परेपछि हाम्रो डिपार्टमेण्टको स्टलमा आएँ । साथीहरू रमझम गरिरहेका थिए । म पनि सामेल भएँ । राति १० जनाजति साथीहरूले स्टलमै सुत्ने योजना बनाए । मलाई पनि ‘आज सँगै बसौं है’ भने । सबै साथीहरू रातको १२ बजेतिर सुते । म र एकजना भाइ सुत्न नसकेर चउरमा गफ गरिरहेका थियौं । कोरियामा विद्यार्थीहरू राजनीतिका कुरा त्यति गर्दैनन् । तर, कुरा गर्ने कुनै विषय नभएपछि मैले नेपाली पारा ल्याएँ । उनलाई भने, ‘हेर भाइ, गएको वर्षहाम्रो कक्षाको सबभन्दा जेठो मनिटर भयो । कक्षामा म दोस्रो जेठो हुँ । अब अर्कोचोटि म मनिटर हुनुपर्छ ।’ यति मात्र के भनेको थिएँ, सुतेका सबै साथीहरू जर्याकजुरुक उठे र बेसुरले ममाथि खनिन थाले । ‘दाइ अनि भोट चाहिँ नेपालबाट ल्याएर खसाल्छौ ? हामीले त दाइ सोझो, इमानदार भनेको त राजनीतिको कुरो पो गर्ने रहेछ, कोरिया बसुन्जेल तपाइंलाई जेजस्तो समस्या परे पनि हामी मद्दत गर्न तयार छौं, तर राजनीतिक मामिलामा ‘नो एक्सक्युज’, ५० वर्षजापानले हामीलाई पैतलामुनि राखेको पीडा यो सोजु (कोरियन रक्सी)को नसाले मेट्न सक्दैन ।’ यति भनेर सबै सुते । मलाई एक शब्द बोल्ने मौका पनि दिएनन । मनिटर हुने मेरो मनसाय पनि थिएन । म स्तब्ध भएँ- यसो पछाडि फर्की साथीहरूलाई नियालेर हेरेँ । कलिलो अनुहार सोजुले रातो भएको थियो तर मैले राष्ट्रियताको तातो रक्तसञ्चार भइरहेको पाएँ । कोरियाली मित्रहरूको राष्ट्रियताप्रति सम्मान व्यक्त गरेँ । अनि फर्केर हाम्रा नेताहरूको राष्ट्रियतालाई सम्झेँ । विज्ञहरूको विश्लेषणलाई गुनेँ । नागरिक र बौद्धिक समाजका तर्कहरू केलाएँ । अनि विद्यार्थी नेताहरूको राष्ट्रियताले ओतप्रोत जोश सम्झँदै कोरियाको खुला आकाशमुनि खुला चउरमा एक रात राष्ट्रियताको पाठ पढेँ ।
नेपाल फर्केको ५ वर्षपछि, राष्ट्रको विकास गर्ने हो भने आँखाबाट आँशु होइन, रगत बहाउनुपर्छ भन्ने मेरा कोरियाली बोस डा. सीसी पार्कसँग पुन: अध्ययनका लागि अनुरोध गरेँ । उहाँको सहयोग र स्वीकृतिमा माष्टर्स डिग्री पढ्न सन् २००० मा पुन: कोरिया गएँ, नेपालको काम उहीँबाट इमेल र इण्टरनेटको माध्यमबाट गर्ने शर्तमा ।
माष्टर्स डिग्रीको कक्षा मार्चमा शुरू भयो र डिसेम्बर महीनाको दोस्रो हप्तातिर पहिलो सेमेष्टरको कोर्स सकियो । १ वर्षको अवधिभर सबैले मेहनतपूर्वक अध्ययन गरेको भनी ह्युण्र्डाई कम्पनीको सर्भिस सेण्टरको मेनेजरले एक दिन रात्रिभोजको आयोजना गरे । खाना र कुराकानी बढ्दै गयो । प्रोफेसर र म आमुन्ने सामुन्ने थियौँ, मेरो बायाँपट्टि ह्युण्र्डाई कम्पनीको मेनेजर र दायाँपट्टि हाम्रो कक्षाको कान्छो भाइ थियो । पहिलाको घटनाले गर्दा अरू कुरामा सजग नभए पनि राष्ट्रियतासँग सरोकार राख्ने कुरामा भने होसियार हुन्थेँ । रमझमको माहोलमा त्यो कान्छो भाइले काहाँ कहाँबाट राष्ट्रिय फूलको कुरा गरिरहेको रहेछ । उसले मलाई नेपालको राष्ट्रिय फूल कस्तो छ भनी सोध्यो । मैले ‘रातो मनमोहक छ । अप्रिल मे महीनातिर यो राष्ट्रिय फूल फुल्दा पहाडै पहाडको देश नेपाल अति रमणीय देखिन्छ । कोरियाको राष्ट्रिय फूलभन्दा फरक छ’ मात्र भनेको थिएँ । शायद मैले अलि बढी बयान गरेर हो कि भाइले अन्यथा सोच्न पुगेछ । ऊ भन्न थाल्यो- ए उसो भए कोरियाको फूलमा रङ छैन हैन ? हाम्रो देश कलरलेस कण्ट्री हैन ? तपाई माष्र्टसको विद्यार्थीले यसो भन्न सुहाउँछ भनी मलाई आच्छुआच्छु बनायो । मैले जति सम्झाए पनि ऊ सम्झिएन । बरु उल्टो उसले साथीहरू र प्रोफेसरको समेत ध्यानाकर्षण गराउन खोज्यो । प्रोफेसरले मेरो कुरामा पनि ध्यान दिइराखेका रहेछन् । उनले भाइलाई सम्झाए । मैले पनि कुरा सुनिराखेको छु, सुनिलको आशय त्यो होइन, तिमी एकोहोरो आफ्नै धुनमा र सुरमा कुरा गरिरहेछौं, तथ्यबाट पर गइरहेछौं भनेपछि भाइ शान्त भयो र सरी भन्यो । बल्ल मेरो सास आयो । प्रोफेसरलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिएँ । यसरी मैले कोरियाको रेष्टुराँको तातो न्यानो भुइँमा बसी दोस्रो रात राष्ट्रियताको पाठ पढेँ ।
यसरी राष्ट्रियता न त रक्सीको नशामा लठ्ठिन्छ, न त आर्थिक प्रलोभनमा बहकिन्छ, न त कुर्सीको मोहमा अल्झिन्छ, न त विदेशीको आश्वासनमा बहकिन्छ । यो त मुटुको रगतसँग अबिरल बहन्छ अनि मुटुको धड्कनसँगसँगै धड्किरहन्छ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि । अनि शतिसालझैं आँधीबेहरी, हुरीबतासको बीचमा पनि पहाडको टुप्पोमा ठिङ्ग उभिइरहन्छ ।
यसथ, सानो पददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको पद पाउन, स्तरअनुसारको सौदाबाजी, भनसुन गरी अवसर प्राप्तिका लागि ती ३१ ओटा आँखाहरूले कहिलेसम्म यो राष्ट्रमा विरोधाभास र भ्रमको खेती गरिरहने हुन् ? अनि आफूलाई नागरिक समाज र विज्ञका रूपमा चिनाउन रुचाउनेहरूले कहिलेसम्म यसलाई मलजल गरी बस्ने हुन् ? खोइ किन हो ३ करोड ५० लाख आँखाहरू केमा लोलाएका हुन्, किन टोलाएका हुन् ?
डा. सुनिल मास्के, दोलखा